Maty tsy tra-drano ilay mpitondra moto nodonin’ny fiara teny Ampefiloha, afakomaly alina. Voalaza fa nipitika lavitra mihitsy ilay mpitondra moto sy ilay moto nentiny vokatry ny dona nahazo azy. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly HJRA izy, saingy namoy ny ainy vokatry ny fahaverezandra be loatra.
Nidoboka am-ponja ireo jiolahy roa mpanao sinto-mahery sady manendaka eny amin’ny faritra Andohatapenaka sy 67 ha. Ny faran’ny herinandro teo izy ireo no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito 67 ha. Naharay antso ny polisy fa misy jiolahy roa tratran’ny olona nanendaka teo amin’ny toerana Vatobe. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka izy roa lahy raha tsy tonga haingana ny polisy naka azy ireo.
Mitoky ny fikarohan’ny polisy ireo jiolahy naman’ilay voatifitra teny Androndra, afakomaly alina. Nandritra ny fifanenjehana teo amin’ny polisy sy ireo jiolahy no nahavoatifitra ny iray amin’izy ireo rehefa nitsofoka tao an-tranon’olona iray eny an-toerana. Voalaza fa jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana ry zalahy ireto ary efa narahin’ny polisy hatry ny ela.